यी ३ राशि जन्मिदै लिएर आउछन् धन कमाउने योग, सानै उमेरदेखि कमाउन थाल्छन् पैसा - Nawalpur Dainik
काठमाडौ । तपाईलाइपनि अनौठो लागेको हुनुपर्छ कसैले कलिलै उमेरमा ह्वात्तै पैसा कमाउन थाल्छन् । उदाहरणका लागि अशोक दर्जी, सचिन परियाल, कमला घिमेरेहरु हेर्नुहोस् न भाडाकुटी खेल्ने उमेरमा नै पैसा र नाम कमाउन थाले । यो उनीहरुले जन्मिदै लिएर आएको योग हो । ज्योतिशी शास्त्र अनुसार मानिसहरुको भविष्यवाणी आफ्नो राशिहरुबाट हुन्छ । राशि जन्मिएको समयमा निर्धारित हुन्छ । तपाईको जन्म कुन कोखबाट भयो भन्ने हैन कुन समयमा भयो भन्ने प्रमुख कुरा छ । किनभने जन्म, विवाह, मृत्युको लागि पनि राशि आवश्यक हुन्छ ।
Prevकुनै केटीले तपाईंलाई मन पराएको थाहा पाउने यी १० तरिका ! टिप्स सहीत
Nextके तपाईका हातमा यी शुभ चिन्हहरू छन् ? जान्नुहोस् यसरी चम्किन्छ भाग्य